आम्दानी – Himalaya Television
सामाजिक सुरक्षा कोषको अहिलेसम्मको आम्दानी र खर्च विवरण पेश गर्न संमितिको निर्देशन (भिडियो रिपोर्टसहित)
५ वैशाख २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म गरेको आम्दानी तथा खर्चको विवरण पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरोकारवालासहित बसेको समितिको आजको बैठकले सामाजिक...
१७ फागुन २०७७ गलेश्वर । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ तोरीपानीका एक कृषकले जडीबुटीको व्यावसायिक खेती गरेर वार्षिक रु २० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ । सदरमुकाम बेनीबजारदेखि नजिकै पर्ने तोरीपानीका कृषक सागर बानियाँले टिमुर र सतुवाका बिरुवा र फल...
कौसी खेतीः सहरमा जग्गा नहुनेका लागि आम्दानीको स्रोत (भिडियो रिपोर्टसहित)
१५ फागुन २०७७ रुपन्देही । पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रमा कौसी खेती गर्ने बढ्दै गएका छन् । शहरी क्षेत्रमा खेतीका लागि जग्गा नपाइने हुँदा घरको छत नै खेतीका लागि उपयोग हुन थालेको छ । रुपन्देहीमा पनि कौशी खेतीतिर आकर्षण बढ्न...
सुन्तलाबाट आम्दानी बढेसँगै स्याङ्जामा सुन्तला खेती गर्ने बढे (भिडियोसहित)
३ माघ २०७७ स्याङ्जा । स्याङ्जामा व्यावसायिक सुन्तला खेती गर्ने क्रम बढेको छ । गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर ७, सिरौंसाका किसानले व्यवसायिक खेती गरेर सुन्तलाबाट राम्रो आम्दानी लिइरहेका छन् । स्याङ्जा गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर ७, सिरौंसाको बगैँचामा लटरम्म...
२९ पुस २०७७ काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना पुरा भएको छ । तर आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा समेत न त लक्ष्य अनुरुप राजस्व उठेको छ न त अनुदान नै प्राप्त भएको छ । ६ महिनामा सरकारले...
बाख्रा पालनबाटै मासिक दुई लाख आम्दानी हुन्छ, किन जानु विदेश ? (भिडियोसहित)
२४ पुस, काठमाडौं । पाल्पामा एक युवाले बाख्रा पालनबाट मासिक २ लाखसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् । रिब्दिकोट गाउँपालिकाका ति युवाले लगनसिलताका साथ काम गरे गाउँमै मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने उदाहरण दिएका छन् । इच्छा शक्ति हुने हो र मेहनत...
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको खर्च र आम्दानी बढ्यो
१० मंसिर, २०७७, सुर्खेत । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको खर्च र आम्दानी बढेको छ । प्रदेश सरकारले पोहोरको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा चालु तथा पूँजीगत दुवै खर्च बढेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको खर्च तथा...
झिनियाँ रोटी बनाएरै वार्षिक आठ लाख आम्दानी (भिडियोसहित)
२८ कात्तिक, २०७७, पाल्पा । विशेष गरी चाडबाडमा बनाइने झिनियाँ रोटी पाल्पाका केही परिवारको जीविकोपार्जनको माध्यम बनेको छ । पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाका १० घर परिवारले झिनियाँ रोटी बनाएरै परिवार चलाउँदै आएका छन् । पाल्पा माथागढी गाउँपालिका–३, कसेनीकी केशलक्ष्मी भट्टराईले...
सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै, चल्छ अब कसरी ? (भिडियोसहित)
२ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । तर सरकारको खर्च भने २ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । साउनदेखि असोजभित्रमै राजस्व संकलन र खर्चबिच २९...
विदेशबाट फर्केर गाउँमै भैंसीपालन, विदेशमा भन्दा बढी आम्दानी (भिडियोसहित)
१३ भदौ, २०७७ गुल्मी । विदेशमा अपमानित हुनुभन्दा स्वदेशमै कृषि कर्म गर्न युवा आकर्षित भइरहेका छन् । विदेशबाट फर्केर गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर–४ का तोयनारायण पाण्डेले अहिले भैँसी पालन सुरु गर्नुभएको छ । सानो लगानीबाट शुरु भएको व्यवसाय...